घरबाट विद्यालय जाने भनी निस्किएका सम्पर्कविहिन तीन बालिका मसाज सेन्टरमा ! | Nepal Ghatana
घरबाट विद्यालय जाने भनी निस्किएका सम्पर्कविहिन तीन बालिका मसाज सेन्टरमा !
प्रकाशित : २० फाल्गुन २०७८, शुक्रबार २१:०६
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट सम्पर्कविहिन भएका तीन बालिका मसाज सेन्टरमा भेटिएका छन् । यही १६ गत विद्यालय जाने भनी घरबाट निस्किएका उनीहरू काठमाडौंको बौद्धस्थित मसाज सेन्टरमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ चुनिखेलस्थित बसपार्क नजिकै डेरा गरी बस्ने उनीहरू स्यानीय विद्यालयमा कक्षा–७ मा अध्ययनरत छन् । फागुन १६ गते बिहान ०९ बजे विद्यालय जाने भनी कोठाबाट निस्किएका बालिका घर नफर्किएपछि आफन्तले खोजीका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।
उक्त जाहेरीका आधारमा प्रहरी प्रभाग बुढानीलकण्ठबाट खटिएको प्रहरीले बौद्वस्थित ग्रीन साइन मोर्गन मसाज सेन्टरमा काम गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी आफन्तको जिम्मा लगाएको परिसरले आज एक सूचना जारी गरी जनाएको छ । उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रभागबाट थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ ।
नयाँ पुस्तक किन्नु भयो नानीबाबुलाई ? यसरी लुटिँदै हुनुहुन्छ कि ?
शिक्षकले विद्यार्थीलाई अश्लील भिडियो देखाएको आरोप, विद्यार्थी आन्दोलित, प्रहरीद्वारा अश्रुग्याँस प्रहार